Somaliya oo ku qososhay hakin Kiiniya dalbatey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo ku qososhay hakin Kiiniya dalbatey
Kiiniya ayaa u muuqata in cabaadkii Ka dhamaadey kadib markii xilli dacwadii la gaarayo go’aankeeda ay dalbatey in la joojiyo. Talaabadan ayaa waxa ku qososhey Somaliya oo sheegtay in dacwada sideeda loo qaado.
p style=”text-align: justify;”>Shalay ayay ahayd markii mid Ka mida qareenada Kiiniya uu sheegay in Kiiniya joojiso tegitaanka dacwadaas. Kiiniya ayaa ku baryootameysa in dacwada si hoose lagu dhameeyo.
p style=”text-align: justify;”>Si kastaba ha ahaatee Kiiniya ayaan laga ogolaan doonin inay curyaamiso dacwada ayadoo marmarsiiyo ma dhiganaysa qareeno ma haysto xilli ay in muddo gaysatey ay ku xaliso arintaas.